Homeसमाचारभाइरल खिरपुरीवालिको टिकटक बनाउने साथी र बेहुलीको बहिनी पनि मिडियामा, भिडियो भाइरल भएपछि गाउँमा यस्तो भयो (भिडियो हेर्नुहोस्)
December 13, 2020 admin समाचार 6630
मलाई यस्तो भा’इरल होला भन्ने लागेको थिएन । साथीको विवाह’मा गएकी थिए । सबैले विवाहको भिडियो टिकटक बनाएर राखेका थिए । मैले पनि साथीको वि’दाईको अन्तिम अव’स्थाको भिडियो खिचेको थिए ।
सबैले खिचेको र टि’कटकमा राखेको देखेर मैले पनि टिकटकमा राखे । तर त्यसरी भिडियो भाइरल होला भन्ने म’लाई लागेको थिएन । केही समय यता एक भिडियो क्लिप सामाजिक सञ्जा’लमा भाइरल भइरहेको एउटा भिडियो जुन यिनै यु’वतीले खिचेकी थिइन् ।
उनले साथीको विवाह’को अन्तिम अवस्थाको भिडियो सं’झना हुन्छ भनेर खिचेकी थिइन् । तर त्यही भिडियोका का’रण साथी निकै भाइरल होलिन् भन्ने कल्प’ना भने गरेकी थिइनन् । मंसिर २२ गते भएको वि’वाहको भिडियो रोशनी मल्लले खिचेकी थिइन् । त्यो भिडियो टिक’टकमा निकै भाइरल भएको छ । ति युवती अहिले पहिलो पटक मिडि’यामा आएकी छन् ।
विवाह गरेर धनगढी’वाट कास्की पोखरा पुगेकी छन् । एक दुलही पहिरनमा रहेकी युवती सुदुरपश्चिमा लव’जमा भन्छिन्, ‘पर्सी आइ हाल्न्या हुँ खि’रपुरी बनाइराख्नु । अचार पनि, धेरै खान्या हुँ । हिजो कम खाँ हुँ नि मैले । धेरै खान्या हुँ । नरुनु ।’ती सामाजिक सञ्जालमा भाइरल दुलहीको माइ’तीघर धनगढी हो । धनगढी उप–महानगरपालिका–५ हसनपुरकी शान्ति शर्मा मुडभ’रीको मंसिर २२ गते विवाह भएको थियो ।-इताजा खबरबाट
आँखा नदेख्ने आमा बुवा पाल्न रत्नपार्कमा गीत गाउँदै ५ बर्षका बालक, सबैलाई चकित पार्ने मिठो आवाज(भिडियो हेर्नुहोस्)
April 7, 2021 admin समाचार 4397
चर्चित गायक प्रेम सा’पकोटा सोनुको नया गित बजा’रमा आएको छ ।गायक प्रेमसापकोटा सोनु र गायिका रचना रिमालको स्वरमा नयां गित मुटु बैना डिजीटल ब’जारमा आएको हो । आर्यन न्यौपानेको लय शब्द रहेको गित प्रेम सापकोटा
यी महान चेली- जसले बाटोमा अलपत्र परेका बृद्ध बृद्धा र बच्चाहरुलाई ११ बर्षदेखि पाल्दैछिन् (भिडियो हे’र्नुहोस)
June 22, 2021 admin समाचार 3654
दुखी : गरिब पिडित की आमा विप’दकाे बेला नाम लिनै पर्यो भने रिमा सापकोटा साइराम नि’र्धक्क लिनु होला। देश भित्र भूकम्पकाे बेला हाेस या फेरी बाढीप’हिरोले घरस’न्तान बगाउँदा हाेस, कोरोनाका कारण लकडाउन हुदा म’जदुरी गरेर
जाडोमा रायोको साग खानुका यस्ता छन् फाइदाहरु
December 8, 2020 admin समाचार 6827
रायोको सागसँग जो कोही परि’चित हुन्छन् । साग नरु’चाउने सायदै नहोलान् । साग खाँदा भि’टामिन पाइन्छ भन्ने पनि सबैलाई थाहा भएकै विषय हो । अहिले रायो साग पाइने मौ’सम हो। जाडो मौस’ममा सजिलै उ’पलब्ध हुने,
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (213884)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (195600)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (182279)